डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै - Nayabulanda.com
डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै
नयाँ बुलन्द २७ पुष २०७५, शुक्रबार १०:३६ 359 पटक हेरिएको
इलाम : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १६ औं चरणको सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेको छ ।
बुधबारदेखि इलाममा पुगेर अनसन थालेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गएरातिदेखि बिग्रन थालेको हो । उनको रक्तचाप कम हुँदै गएको छ ।
शरीरमा पसिना आउने तथा छाती दुख्ने भएपछि इलाम जिल्ला अस्पतालको चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् । चिकित्सकहरुले उनको शरीरमा चिनीको मात्रा घटेको हुनसक्ने बताएका छन् । तर, डा. केसीले सुगरको परीक्षण गर्न मानेका छैनन् ।